ငရဲပြည်တွင် ၇ ရက်: အစဉ်အမြဲအကောင်းဆုံး၊ အကောင်းဆုံးတင်းနစ်ရုပ်ရှင် - ဟာသ
ငရဲတွင် ၇ ရက် (Days in Hell) - သင်မမြင်နိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးတင်းနစ်ရုပ်ရှင်
7 Days Hell Best Tennis Movie You Ve Ever Seen
Daredevil, လုကာကေ့, သံလက်သီး ESPN မဂ္ဂဇင်းရဲ့ The Body ပြinနာ၌ထင်ရှား။ , အမေဇုံကပထမဆုံးသောရုပ်ရှင်အတွက် Spike Lee မှာကြိုးတန်းစီထားသည် ဟာသ က Bryce Olin လွန်ခဲ့သော5နှစ်က @bryceolin ကိုလိုက်နာပါ
ပြီးခဲ့သည့်တနင်္ဂနွေ, HBO ၂၀၁၅ Wimbledon Final အကြို Andy Samberg နှင့် Kit Harington ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသောမျှော်လင့်ထားသည့်တင်းနစ်လှောင်ပြောင်မှုအားထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ငရဲမှာ ၇ ရက် Aaron Williams (Andy Samberg) နှင့် Charles Poole (Kit Harington) တို့အကြားခုနစ်ရက်ကြာတင်းနစ်ကစားပွဲကိုရာဇ ၀ င်မှတ်တမ်းတွင်ဖော်ပြထားသည်။ ဒီဇာတ်လမ်းကို Jake Szymanski မှရိုက်ကူးခဲ့ပြီး Murray Miller ကရေးသားခဲ့သည်။ Lena Dunham၊ Fred Armisen, Serena Williams, Will Forte နှင့်အခြားအရာများနှင့်အတူမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ပုံစံဖြင့်ဖော်ပြခဲ့သည်။
Kissing Booth3လွှတ်ပေးသည့်နေ့ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်သြဂုတ်လတွင်အတည်ပြုခဲ့သည်
Thunder Force သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ 9ပြီလ ၉ ရက်၊
အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသည့်သူငယ်ချင်းများကိုဘာကြောင့် R သတ်မှတ်သလဲ။
ရိုးရိုးသားသား, HBO ရဲ့ ငရဲမှာ ၇ ရက် ငါတီဗီကြည့်ခဲ့ဖူးတဲ့အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်လိမ့်မည်, ဖြစ်ကောင်း, Hardhome (အပိုင်း 8, ရာသီ 5) ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ ။ တကယ့်ကိုအံ့သြစရာကောင်းတဲ့၊
ဝန်ခံရမည်, အန်ဒီဆမ်ဘာ့ဂ်, Kit Harington နှင့်စာရွက်စာတမ်းများ၏ကြီးမားသောပန်ကာအဖြစ်, ငါအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားမိခဲ့ ငရဲမှာ ၇ ရက် နှင့်ငါ့မျှော်လင့်ချက်များလမ်းလည်းမြင့်မားသောဖြစ်ကြသည်။ တောင်မှသူကပြောသည်နှင့်အတူငါမှာအားလုံးစိတ်ပျက်မခံခဲ့ရ! တောင်မှနည်းနည်းအတွက်!
ကျွန်တော့်ခေါင်းထိပ်မှာဘယ်တင်းနစ်ရုပ်ရှင်ကိုမှမစဉ်းစားနိုင်ဘူး။ ငရဲမှာ ၇ ရက် အကောင်းဆုံးသောတင်းနစ်ရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။ တူတူပဲ၊ ငါကဒါကအကောင်းဆုံးတင်းနစ်ရုပ်ရှင်လို့ပြောရင်ရယ်စရာဖြစ်ပေမယ့်တင်းနစ်ရုပ်ရှင်အားလုံးကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာ၊ ၇းDays in Hell ဆိုတဲ့ဟာတကယ်တော့အကောင်းဆုံးတင်းနစ်ရုပ်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ် ဘယ်တော့မှမ
ငါ့အတွက် ငရဲမှာ ၇ ရက် ကောင်းတယ်နဲ့တူတယ် စနေနေ့ညတိုက်ရိုက် မိနစ် ၄၀ ကြာသောပုံကြမ်း။ ပုံကြမ်းဟာသတွေအများကြီးရှိသကဲ့သို့အဘယ်သူမျှမ dropoff ရှိပါတယ်။ ပုံကြမ်းရှည်လေကြာရှည်စွာကြည့်ရှုသူများသည်စိတ် ၀ င်စားမှုပျောက်ဆုံးနိုင်လေဖြစ်သည်။ In ငရဲမှာ ၇ ရက် ဒါကနည်းနည်းလေးဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်၊ ဒါပေမယ့်ရုပ်ရှင်ကဆက်ပြီးတိုးတက်နေသရွေ့၊ ပိုပြီးနက်ရှိုင်းပြီးပျော်စရာကောင်းလာမယ်လို့ငါထင်တယ်။
ရဝုဏ်မှသည်အသေသတ်ခြင်းအထိ ၄၂ မိနစ်ကြာလှုပ်ရှားမှုအတွက်စိတ်ပျက်စရာမရှိပါ။ HBO ၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောအစီအစဉ်ဆွဲမှုကြောင့်၊ ငရဲမှာ ၇ ရက် ပြီးပြည့်စုံသောအချိန်ကိုက်ပညာရှိဖြစ်ခဲ့သည်။
သေချာတာပေါ့၊ ဒါကအနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးပြီးအကြမ်းမဖက်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါမင်းအဲဒီလိုရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေနဲ့မျှော်လင့်ရမယ်ထင်တယ်။ ဒါဟာကျိန်းသေကောင်းသော ol '' မိသားစုပျော်စရာ, Cot မဟုတ်ပါဘူး။ နှင့်အညီ, အားဖြင့်ငါဒီတစ်ခုအဘို့အလှည့်ပတ်ကလေးတွေရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုလို။
ငရဲမှာ ၇ ရက် HBO, HBO Now နှင့် HBO တို့တွင်ရနိုင်သည်။ မင်းအတွက်ဘာကောင်းလဲဆိုတာမင်းသိပြီဆိုရင်၊ အခုအချိန်မှာအကောင်းဆုံးတင်းနစ်ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပါလိမ့်မယ်။
သူရဲကောင်း Fiennes Tiffin ၏အသက်၊ Instagram၊ အမြင့်၊ ချစ်သူ၊ အခန်းကဏ္: - After ကြယ်အကြောင်းသိရန်အရာအားလုံး
Game of Thrones ရာသီ (၈) ပွဲမှာဘယ်တော့ပြသလဲ။
၂၅ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်စောင့်ဆိုင်းရန်အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်း ၁၅ ယောက်
အမ်မလီခေါ်စက်ဝိုင်းရာသီ ၂ ကစားသမားသည်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်သည်
သင်သက်သတ်လွတ်ဖြစ်လာစေမည့် Netflix မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် ၅ ခု
HBO Max ကိုစတင်မိတ်ဆက်စဉ်ကြည့်ရှုရန်အကောင်းဆုံးတီဗွီ ၅ ခု
The Ranch Part 8: Premiere နေ့၊ သရုပ်ဆောင်၊ ကြံစည်မှုနှင့်အခြားအရာများ
The Santa Clause3သည် Netflix ရှိပါသလား။
Daredevil ရာသီ 3, ဇာတ်လမ်းတွဲ 13 ပြန်လည်စုစည်းမှု: ဂရိတ်ဇာတျသိမျး
၁၃ ရာသီအတွက်အကြောင်းရင်း ၁၃ အကြောင်းအရင်း ၁၁ ပြန်လည်စုစည်းခြင်း - Bryce နှင့် Chloe
တစ် ဦး အချိန်ရာသီ2မှာတစ်နေ့: ဖြန့်ချိသည့်နေ့ရက်, အချိန်, နောက်တွဲယာဉ်နှင့်အနှစ်ချုပ်
လုကာကေ့ရာသီ 1 ဇာတ်လမ်းတွဲခေါင်းစဉ်များနှင့်ကြံစည်မှုအကျဉ်းချုပ်
Netflix တွင်အကောင်းဆုံးဟာသတီဗွီအစီအစဉ် ၅၀ - Blue Mountain State သည်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွင်ပါဝင်သည်
မိဖုရား Netflix အပေါ်ဖြစ်သည့်အခါဆူညံအော်ဟစ်ပါလိမ့်မယ်
ဘယ်အချိန်မှာ Outlander ၏ရာသီ4netflix အပေါ်ဖြစ်လိမ့်မည်
nanatsu no taizai ရာသီသစ်
၂၀၁၀ သြဂုတ်လတွင်ကြည့်ရှုမည့်အကောင်းဆုံး Netflix ရုပ်ရှင်အသစ် ၂၅ ကား
The Conjuring3လွှတ်တင်ရက်၊ သရုပ်ဆောင်၊ အနှစ်ချုပ်၊ နောက်တွဲတွဲနှင့်အခြားအရာများ
Netflix အသစ်ဖြန့်ချိ: အောက်တိုဘာ 1, 2017
ယခုတနင်္ဂနွေနေ့တွင် Netflix တွင်ကြည့်ရှုရန် Code 8 နှင့်ကောင်းသောရုပ်ရှင် ၅ ခု